सिडी विजयको पुतलीमा कबिर र गरिमा (भिडियो)
बिहिवार, बैशाख ३०, २०७८ ०७:४३:३७ युनिकोड
सोमवार, कार्तिक १७, २०७७ रंगसंसार
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को पहिलो सिजनका विजेता गायक सिडी विजय अधिकारीको स्वर रहेको रोमान्टिक गीत ‘पुतली’को भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । अमेरिका निवासी प्रोफेसर डा. कैलाश घिमिरेको रचना रहेको यस गीतमा राजेश थापाको संगीत रहेको छ । जसलाई बिबी अनुरागीले संगीत संयोजन तथा श्यामश्वेत रसाइलीले मिक्सिंग मास्टररिंग गरेका छन् ।
गीतमा टिकटक हुँदै म्यूजिक भिडियोमा चर्चित बनेकी गरिमा शर्माका साथ चलचित्र ‘लम्फु’बाट डेब्यु गरेका नायक कबिर खड्का र बाल कलाकार आर्शिना भट्टराईले अभिनय तथा नृत्य गरेका छन् । आफुले मन पराएको यूवतीलाई साथीहरुको सहयोगमा फकाउँदै गरेको रोमान्टिक अवस्था भिडियोमा देख्न सकिन्छ । साथै गाउँघरमा आउँदै गरेको दशैँको माहोललाई रमाइलो ढंगबाट उतारिएको छ ।
भिडियो उत्सव दाहालको छायांकन, नविन निरौलाको सम्पादन तथा दिपेन गौतमको निर्माण व्यवस्थापनमा तयार गरिएको छ । सुबोल थापाको नृत्य निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियोलाई जया शर्माको कन्सेप्टमा सुव्रतराज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक १७, २०७७, ०१:३९:००
‘फूलमाया’मा किन यति धेरै कलाकार राखियो ? शुक्रवार, बैशाख १०, २०७८ 93
जातिय कुरीति र कुसंस्कार बिरुद्द लड्न तयार छौं - मोडल सुजना बर्देवा मंगलबार, जेठ २०, २०७७ 794
सवीनको झुर फण्डा शुक्रवार, चैत्र ७, २०७६ 1355
मिस नेपालको विरासत ? आइतवार, चैत्र २, २०७६ 839